Handle Door, Door Hardware, izixhobo Hardware neZilinganisi - Yuqiang
Ihenjisi ehlengahlengiswayo + Strip ezantsi
Qingdao Yuqiang Hardware Co., Ltd. yinkampani ngokukodwa R & D, imveliso kunye nokuthengiswa kweemveliso zokwakha yentsimbi. Uzinikezele ekuboneleleni ngemveliso ekwizinga eliphezulu lezinto zokwakha (kubandakanya ialuminium, iingcango zeplastikhi kunye neefestile kunye nezixhobo zodonga lomkhusane, izixhobo zombane: ezona mveliso ziphambili yibhokisi yolawulo lokudibanisa umlilo, ibhokisi yolawulo lwomoya okrelekrele. Ukuvulwa kwefestile, ukuvulwa kwewindow evaliweyo kunye nokuvula iwindows yokunxibelelana ngesandla) kunye nothethwano lobuchwephesha olunxulumene noko.
Usapho lakwa Yuqiang lwamalungu angaphezu kwama-300 kwihlabathi liphela kwaye lusakhula
I-50000㎡ yomzi-mveliso iqinisekisa amandla azinzileyo kunye nemveliso
Iimveliso Yuqiang zithengiswa kumazwe angama-26 kunye nemimandla ehlabathini lonke
Yuqiang ukhonza ngaphezu kwama-2000 abathengi kunye namaqabane
Uncedo lwethu Isikali seshishini Iimveliso eziphambili
Izinto zokwenza izinto zokuphosa zenziwe nge-alloy ezine-in-one alloy, kwaye ifomula yezinto eziphambili (± 50 ℃) ayonakalisi okanye yaphule.
Zonke iinxalenye zensimbi ezingenazintsimbi zenziwe ngezinto ezingama-304, eziqulathe i-nickel engu-7.5-8.5, engarusi. Kaninzi
I-Yuqiang inesiseko semveliso esingaphezulu kwama-50,000 ㎡ kunye nabasebenzi abangaphezu kwama-350. Inenani lentengiso kunye neearhente zenkonzo ekhaya nakumazwe aphesheya, kwaye iimveliso zayo zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-20 nakwimimandla.Kaninzi
Iimveliso eziphambili zi-aluminium-zeplastikhi ezingeniswe ngaphakathi, ngaphakathi nangaphandle kwe-casement, ikhethini lokuvula udonga lwewindows; nekudodobalisa ilangatye nekudodobalisa inkqubo yehardware, isixhobo sokuvula sombane, izixhobo zokuphefumla, njl.Kaninzi
I-Dongjiakou Wharf-yoMvelisi weQingdao Port Authority
Ibhanki ye-Everbright-uMqulunqi we-Everbright Real Estate
Indlu yoPhuculo lweZikhululo zoThutho lwaMantla e-Beijing Zhongjian
Umphathiswa oPhakamileyo weMpuma yeJinshi yokuThengisa izindlu